Faah faahin:- Dagaal culus oo habeenkii xalay ka dhacay deegaanka Budbud ee gobolka Galgaduud – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Dagaal culus oo habeenkii xalay ka dhacay deegaanka Budbud ee gobolka Galgaduud
Waxaa faah faahin dheeraad ah laga helayaa dagaal culus oo muddo saaacado ah socday oo habeenkii xalay ka dhacay deegaanka Budbud ee gobolka Galgaduud.
Dagaalkaasi ayaa sida la sheegay bilawday kadib markii ciidamo ka tirsan Xarakada Al-shabaab ay weerar xoogan ku qaadeen xarumo ay ku sugnaayeen ciidamada militeriga ee dowladda federaalka Soomaaliya.
Inta la xaqiijiyay waxaa dagaalkaasi ku geeriyootay ilaa 10 qof oo isugu jira dad shacab ah iyo askar ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya, iyadoona sidoo kale ay ku dhaawacantay tiro intaas ka badan.
Ciidamada militeriga ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa gebi ahaan isaga baxay deegaanka Budbud ee gobolka Galgaduud, waxaana saakay gacan ku haynta deegaankaasi la wareegay ciidanka Al-shabaab oo haatan si buuxdo halkaasi u maamulaya.
Dhinaca kale, waxaa maalintii shalay deegaanka Budbud isaga baxay ciidanka Itoobiya oo mudooyinkii dambe halkaasi ku sugnaa, waxayna taasi keentay in Al-shabaab ku dhiiradaan inay soo weeraraan deegaankaasi islamarkaana ay dagaal kula wareegaan gacan ku haynteeda.
Ciidanka militeriga ee dowladda Soomaaliya ayaa la sheegayaa inay u ruqaansadeen dhinaca deegaanka Moqokori oo qiyaastii 50km u jirta deegaanka Budbud ee gobolka Galgaduud, iyagoona kadib ku biiray ciidanka Itoobiya oo maalintii shalay deegaankaasi gaaray.
Ma jirto hadal kasoo baxay saraakiisha ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo ay kaga warbixinayaan deegaankaan saqdii dhexe xalay ka dhacay deegaanka Budbud ee gobolka Galgaduud, iyo sababta ay ciidankooda u faarujiyeen deegaankaas.
Dhinaca kale, waxaa saakay wadooyinka deegaanka Budbud ee gobolka Galgaduud lagu arkayaa dagaalyahano ka tirsan Xarakada Al-shabaab, iyadoona dadka deegaanka ay ka cabsi qabaan in Al-shabaab ay waxyeeleeyaan dadkii xarumaha ganacsi halkaasi kulahaa islamarkaana wax ka iibin jiray ciidanka dowladda iyo kuwa Itoobiya xilligii ay halkaasi ku sugnaayeen.